ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း | Piedra (Xiamen) ပန်းပုကုမ္ပဏီလီမိတက်
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO ။ , LTD အောင်အထူးပြုသည် သတ္တုပန်းပု၊ ကြေးဝါရုပ်ထု၊ ကယ်ဆယ်ရေးပန်းပု၊ ဖိုက်ဘာမှန်ပန်းပုစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ထိုကြေးဝါပန်းပုနှင့်သတ္တုအနုပညာလက်ရာများကိုဥယျာဉ်ပန်းပု၊ ကြီးမားသောအပြင်ဘက်ရုပ်ထုများ၊ သတ္တုနံရံအလှဆင်ခြင်း၊ ခြံအဆင်တန်ဆာများစသည်တို့အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
နှစ်ပေါင်း ၁၅ နှစ်ကျော်သတ္တုပန်းပုနှင့်ကြေးနန်းပန်းပုများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တင်ပို့ခြင်းတို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအဆင့်မြင့်အရည်အသွေး၊ သံမဏိပန်းပုများအပေါ်တွင်တောက်ပသောတောက်ပသောအကျိုးသက်ရောက်မှု၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောအနုပညာလက်ရာများကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းပုပန်းပုများသည်အနုပညာရှင်များ၊ ဒီဇိုင်နာများ၊ အနုပညာပြခန်း၊ လက်ကားရောင်းသူများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများအတွက်ဖြစ်သည်။
တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးရှိသောစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့်ပြည်တွင်းဂုဏ်သိက္ခာတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းပုများကိုအမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ အစ္စရေး၊ အင်ဒိုနီးရှားစသောနိုင်ငံများစွာသို့ရောင်းချခဲ့ပြီးယခုတွင်မလေးရှား၌အေးဂျင့်များရှိသည်။ စင်္ကာပူနှင့်ဖိလစ်ပိုင်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်တောက်ပသောအနာဂတ်ကိုအတူတကွဖန်တီးနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းရန်ကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်လူများပိုမိုမျှော်လင့်နေကြသည်။
သဘောတရား "အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေး, အကောင်းဆုံးအကြွေးနှင့်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှု" ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်စိတ်ဝိညာဉ်သည်။ ဆန္ဒရှိသင်တို့ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အခွင့်အလမ်းရှိနိုင်ပါသည် !!
၀ န်ထမ်းအရေအတွက် - 100 ~ 150
တည်ထောင်သည့်နှစ် - 2006
ပို့ကုန် pc: 80% - 90%
ကျွန်တော်တို့ဟာဖောက်သည်တွေအများကြီး onexhibition and art gallery ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏မိတ်ဖက်များဖြစ်ပြီးပထမ ဦး ဆုံးဆက်သွယ်မှုမှ ၀ ယ်ယူပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှု။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပန်းပုပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်ဆွေးနွေးပြီး၎င်းတို့အတွက်ကြီးမားသောသတ္တုပန်းပုများကိုပေးသည်။ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်အဆက်အသွယ်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့ပြီးသူတို့ထံမှနာမည်ကောင်းရရှိခဲ့သည်။
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO ။ , LTD ၁၀ နှစ်ကျော်ပန်းပုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ဒီဇိုင်းနှင့်အတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီးစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောပန်းပုနှင့်ရုပ်ထုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတွင်သံမဏိ၊ သတ္တု၊ ကြေးဝါနှင့်ဖန်မျှင်ထည်များပါဝင်သောပန်းပုများပါဝင်သည်။ ပန်းပုများအားလုံးကိုအပြင်ပန်းအလှဆင်ခြင်း၊ အားလပ်ရက်အပန်းဖြေစခန်း၊ ဥယျာဉ်အလှဆင်ခြင်း၊ ပင်လယ်ကမ်းခြေအလှဆင်ခြင်း၊ အိမ်အလှဆင်ခြင်း၊ ဟိုတယ်အလှဆင်ခြင်း၊ ကလပ်အလှဆင်ခြင်း၊ ဈေးဝယ်စင်တာအလှဆင်ခြင်း၊ ရုံးအဆင်တန်ဆာများ၊ အိမ်အဆင်တန်ဆာများ၊ ပိုမိုခေတ်မီပြီးဖန်တီးမှုဆိုင်ရာပန်းပုများကိုယုံကြည်ပါကသင်၏မျက်လုံးများကိုပျော်မွေ့စေပြီးသင့်စိတ်ကိုလွတ်စေလိမ့်မည်။
စကားလုံးတစ်လုံးဖြင့်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျွမ်းကျင်သောနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောအဖွဲ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့တွင်အမြင်ကျယ်အမြင်ရှိသောခေါင်းဆောင်၊ အရည်အချင်းရှိသောအရောင်းသမားများ၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောအနုပညာဒီဇိုင်နာများ၊ အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသောလုပ်သားများ၊ ပန်းပုထုခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ထားသောညွှန်ကြားချက်များပြုလုပ်ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။ PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO ။ , LTD ဖောက်သည်ရဲ့တောင်းဆိုမှုအရသေချာပေါက်ဝန်ဆောင်မှုအများကြီးပေးနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကောင်း:
01. ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူရည်ညွှန်းရန်အတွက်ဆွေမျိုးပန်းပုရုပ်ပုံများကို ဦး စွာပေးပါ။
၀ န်ဆောင်မှုပေးရန် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက်လုပ်ငန်းခွင်နေရာချထားခြင်းလမ်းညွှန်ချက်ပေးခြင်းနှင့်စီမံကိန်းကြီးများတည်ဆောက်ရန်အလုပ်သမားများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါ။
သင့်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုမပေးမီနှင့်အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ဤနေရာတွင်အမြဲတမ်းရှိပါ။
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO ။ , LTD ပန်းပုထုခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့တွင်ကြိုတင်စဉ်းစားထားသောခေါင်းဆောင်များ၊ ပါရမီရှင်ဒီဇိုင်နာများ၊ အရည်အချင်းရှိသည့်အရောင်းသမားများ၊ ကျွမ်းကျင်သောလုပ်သားများ၊ QC ထိန်းချုပ်သူနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောအလုပ်သမားများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့ထံစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သင့်အားလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO ။ , LTD
အခန်း ၁၄၀၇၊ ချမ်းအေး၊ န။ ၇.၇-၇၇ LVLING လမ်း၊ ဟူလီခရိုင်၊ XIAMEN, 361009, ဖူဂျီ, တရုတ်
ဖက်စ်: 0086 592 5532472